နားခိုရာ: EMBA Graduation@ အလွဲများနဲ့ နံနက်ခင်းတစ်ခု
EMBA Graduation@ အလွဲများနဲ့ နံနက်ခင်းတစ်ခု
11-Oct-08 အခုအပတ် တနင်္ဂနွေနေ့က ကိုယ်တို့ EMBA 4th batch ရဲ့ Graduation ပါ။ MBA 11th Batch နဲ့အတူယူရတာပေါ့။ အခြားအခြားသော ဘွဲ့များနဲ့ဆိုရင် စုစုပေါင်း လူ ၇၀၀ကျော်ပေါ့။ အစမ်းလေ့ကျင့်တဲ့ နေ့ကတော့ နှစ်ရက်စာ လူတွေကို ပေါင်းပြီး တစ်မနက်ထဲမှာ ပေးလိုက်တာ။ အဲဒီတုန်းက လူက တစ်ထောင့် ငါးရာလောက်ရှိမယ်။ အဲဒီနေ့ကတော့ ကိုးနာရီလောက်စပြီး သိသင့်သိထိုက်တာတွေ ဆောင်ရန်ဆောင်ရန်တွေ ပြောပြီး တစ်ယောက်ချင်း စင်ပေါ်တက်ယူပေါ့။ ဘွဲ့နှင်းသဘင်နေ့ကြရင် တက်ဖို့ကဒ်၊ ဧည့်ကဒ် ကားဝင်ခွင့်တွေ ပေးတာပေါ့။ ကိုယ့်အလည့်ကျတော့ တက်ယူလိုက်ပြီး ပြန်မထိုင်တော့ပဲ အပြင်ထွက် မတွေ့တာကြာတဲ့သူတွေနဲ့ မာကြောင်းသာကြောင်း လေဖောကြ စုပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ကြပေါ့။ ဆယ်နာရီခွဲလောက်မှာ အပြင်ရောက်နေပြီ။
ဘွဲ့နှင်းသဘင်ရက်မှာတော့ အိမ်က ခုနစ်နာရီကျော်ကျော်ကလေးထွက်လာတယ်။ ကိုယ်ရယ် မိန်းမရယ်ပေါ့။ သားကိုတော့ သူ့အဖွားနဲ့ ထားခဲ့တယ်။ ဘွဲ့နှင်းသဘင်အနောက်ပေါက်ဖွင့်ထားလို့ အင်းယားလမ်းပေါ်မှာပဲဆင်းပြီး နောက်ပေါက်ကနေ၀င်လိုက်တယ်။ အိမ်ဘေးက Taxi ကို မှာထားပြီး စီးလာကြတာဆိုတော့ အဓိပတိ main ၀င်ပေါက်ကဆို လမ်းလျှောက်ဝင်နေရမှာလေ။ အိမ်ကအထွက်မှာ ရှပ်အင်္ကျီလည်ကတုံးလက်တိုနဲ့ ပုဆိုးပဲ ၀တ်ခဲ့တယ်။ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမနားရောက်မှ မဲမဲကြီးဝတ်ပြီး ၀င်မယ်ပေါ့။ ကိုယ်တို့ရောက်တော့ ခင်မောင်လွင်လဲ ရောက်နှင့်နေပြီ။ သူကလဲကိုယ့်လိုပဲ။ ရှပ်အင်္ကျီနဲ့ပုဆိုးလေးနဲ့။ အထုပ်ကလေးဆွဲလို့။
မဲမဲကြီးကိုဝတ်ကြမယ်လို့ ပြင်ဆင်တော့ ပြဿနာကစတော့တာပဲ။ ပုခုံးပေါ်တင်တဲ့ ၀တ်ရုံစကို ထားတဲ့ပုံ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူဘူးဖြစ်နေတယ်။ ခင်မောင်လွင်က အပြာစကို အပေါ်ထက်ထားပြီး တပ်ထားတယ်။ ကျွန်တော်က အပြာစကို အောက်ဖက်မှာ ထားဖို့ ပြင်ဆင်ထားတယ်။ နှစ်ယောက်မတူဖြစ်နေလို့ အနီးနားလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ မသက်ဝါတစ်ယောက် ခန့်ခန့်ညားညားကြီး ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံနေတာ တွေ့လိုက်တယ်။ သူ့ကိုမြင်မှ ပိုဆိုးသွားတယ်။ သူက အနီအပြားအကြီးကို တစ်ပြားတည်း တပ်ထားတယ်။ ဒုက္ခတော့ရောက်ကုန်ပြီ။ ဒါနဲ့ မသက်ဝါကို မေးရတာပေါ့ "အမကြီး အခုလိုတပ်ထားတာမှန်လား" ဆိုတော့ သူက "မသက်တို့လဲဒီလိုပဲ တပ်လာကြမှာတဲ့" ပြောနေရင်း ကျော်မင်းလွင်တို့ ကိုသောင်းထိုက်တို့ ရောက်လာတယ်။ သူတို့က အပြာစ အောက်ထားတဲ့လူနဲ့ အပြာစ အပေါ်ထားတဲ့သူနဲ့။ အားလုံးဇဝေဇ၀ါတွေဖြစ်လို့။ သိပ်မကြာခင်ပဲ ကိုရဲကြီးနဲ့ နုနုတို့ ရောက်လာတော့ သူတို့က အနီအပြားအကြီးနဲ့။ “ဒါအမှန်ပဲ” တဲ့။ မသက်တို့ ၀င်းကုလား တို့ကလည်း ၀တ်စုံသွားထုတ်တုန်းက အဲဒီမှာမေးလာခဲ့ပြီးသားတဲ့ ဒါအမှန်ပဲတဲ့။ အဲဒါနဲ့ပဲ တစ်ဖွဲ့လုံး အနီပြားကြီး ပုံစံပြောင်းကြတာပေါ့။ အမျိုးသမီးတွေက ပြောင်းရတာ ခက်ခက်ခဲခဲပေါ့။ ခေါင်းမှာ ပန်းတွေနဲ့ ဦးထုပ်နဲ့ ဆံပင်နဲ့ကို ကလစ်တွေနဲ့ တွယ်ထားနဲ့။
အားလုံး ရဲရဲတောက် ပုံစံဖြစ်သွားကြပြီး group photo တွေ ရိုက်ကြပါလေရော။ အခမ်းအနားစခါနီးလို့ဝင်ကြမယ်ဆိုတော့ 11th batch က ကလေးတွေ အားလုံးက ၀တ်ရုံကို ၀တ်ထားပုံက အပြာစအောက်က အလယ်က အမဲနဲ့ အပေါ်ဆုံးက အနီကွတ်လေး။ ဟဲ့ဟဲ့ နေကြပါဦး MBA ဘွဲ့တူတူပဲဟာကို ဘာလို့ ၀တ်ရုံဝတ်ပုံကွဲနေရတာတုန်း။ ဒါနဲ့ သူတို့အတန်းက EC ညီလေး တစ်ယောက်ကို ခေါ်မေးရတယ်။ သူကလဲ သူတို့ ၀တ်ထားတာ အမှန်ပါတဲ့။ တီချယ်ကြီးကို မေးပြီးပြီတဲ့။ ဟောဗျ ... ဒုတ်ခ။ ဒါနဲ့ အားလုံး ကသောကမျော ၀တ်ရုံကို ဖြုတ်ကြလှည့်တပ်ကြ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် လုပ်ပေးကြပေါ့။ နေကလည်း ရှစ်နာရီကျော်ပဲရှိသေးတယ် ပူကျစ်တောက် နေတာပဲ။ အားလုံးချွေးတစ်လုံးလုံးနဲ့ ဖြစ်ကုန်ရော။ တစ်ချို့ဆို သုံးခါပြောင်းလိုက်ရတယ်။ ကျော်မင်းလွင်ဆိုရင် သူ့ဘာသာ ၀တ်လာတာက အမှန်။ ဒီရောက်တော့ ကျွန်တော်တို့ လျှာရှည်တာနဲ့ တစ်ခေါက် ပြောင်းလိုက်ရရှာတယ်။ ၀င်ခါနီးတော့ နောက်တစ်ခေါက် ပြောင်းဝတ်ပေါ့။ ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။
၀တ်ရုံကိစ္စပြီးတော့ တိုးဝှေ့ပြီး ခန်းမထဲဝင်ကြပါလေရော။ ၀င်ခါစမှာ ခန်းမလေးက Aircon တွေနဲ့ အေးသလိုလိုပဲ။ ကိုယ့်နေရာကိုယ် မထိုင်ကြခင် ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ကြတာပေါ့။ ကိုးနာရီလောက်မှာ အခမ်းအနား စတယ်။ ပါချုပ်နဲ့ ဆရာဆရာမကြီးများ ဆိုင်းဝိုင်းက ၀တ်ရုံတော်ကြိုးသီချင်းနဲ့ ခန်းမထဲလျှောက်ဝင်လာကြပြီး စင်ပေါ်တက်နေရာယူကြတယ်။ ဘွဲ့ယူမဲ့သူ အားလုံး မတ်တတ်ရပ်ပေါ့။ သူတို့ထိုင်ပြီးတော့ အားလုံး ပြန်ထိုင်ကြတယ်။ ထိုင်လိုက်ရုံရှိသေးတယ် နိုင်ငံတော်သီချင်းကို ဆိုင်းဝိုင်းကတီးတော့ ထကြရပြန်ရော။ ပြီးတော့ မတ်တပ်ပြန်ရပ်ပြီး ကတိသစ္စာပြုရတယ်။ မောင်တို့မယ်တို့ဟာ အောက်မြှောက် ပေါင်မြင်ကြပြီ ဖြစ်လို့ ဘာညာ နေကြာကွာစိ... နေထိုင်ပြောဆိုကြပါမည်ဟု ကတိပြုပါ၏လော...ပေါ့။ အားလုံးကလဲ ကတိပြုပါ၏ ပေါ့။ ပြီးတော့ တစ်ယောက်ချင်း တက်ယူကြပေါ့။ ကိုယ့်အလှည့်တက်ယူပြီး နေရာမှာလာပြန်ထိုင်။ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် .... ကြာလာတော့ တဖြေးဖြေး ပျင်းလာရော။ ပူလာလိုက်တာလဲလွန်ပါရော။ မီးပျက်သွားလို့တဲ့ Aircon တွေ မလည်တော့ဘူး။ ကောင်းရော။ ချွေးတွေက အ၀တ်မဲမဲကြီးအောက်မှာ တောက်ကနဲ တောက်ကနဲ ကျနေတယ်။ ၀ တဲ့သူတွေဆိုရင် ၀က်ကို ပေါင်းတင်ထားတဲ့ရုပ်တွေနဲ့။ မုန့်တွေ လက်ကမ်းပြီးစားကြ ရေတွေသောက်ကြ တိုးတိုးတိတ်တိတ် စကားများကြ...နဲ့ အချိန်ဖြုန်းရတာပေါ့။
အားလုံးပြီးတော့ ပါချုပ်က ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကို ရုပ်သိမ်းပြီလို့လဲ ဆိုလိုက်ရော ဆိုင်းဝိုင်းက ဒိုင်းကနဲ ထပြီး တီးပါလေရော။ ကိုယ့်အရှေ့တန်းက 11th batch က ညီလေးတစ်ယောက် ဟဲ့သောက်ပလုတ်တုတ်ဆိုပြီး အလန့်တကြားထခုန်လို့ ရယ်ရသေးတယ်။ အားလုံးက အိပ်ငိုက်နေတာ ဆိုင်းဝိုင်းက တီးလိုက်မှ နိုးနိုးကြားကြား ဖြစ်သွားကြတယ်။ ပြီးတော့ ပါချုပ်တွေ ဆရာဆရာမတွေ နောက်ကနေ နှစ်ယောက်တစ်တွဲ လိုက်ပြီး ထွက်ကြရတာပေါ့။ အပြင်ရောက်တော့ group photo တွေ ရိုက်ကြပေါ့။ ကိုယ်တော့ ကြာကြာ ဆက်မနေနိုင်တော့ဘူး ဒီမဲမဲကြီး ၀တ်ပြီး အရမ်းကို အနေရကြပ်လာတာနဲ့ ချွတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ဘွဲ့ဝတ်စုံအပ်တာကလည်း အနီးနားက RC မှာပဲဆိုတော့ တစ်ခါတည်း အပ်ခဲ့လိုက်တယ်။ ဘွဲ့လက်မှတ်တစ်ခုရခဲ့ပြီး ချွေးပုတ်တွေလည်း တော်တော်ထွက်သွားမယ်။
အဟက် ... ပညာရေးအဖွဲ့က အောက်မြှောက် ပေါင်မြင်ပြီးဖြစ်သည် ဟု ဆုံးဖြတ်ကြသဖြင့် အနော် MBA တစ်ယောက်ဖြစ်လေပြီ .... :D
Posted by little moon at 12:31 PM
congratulation ပါ အကို။ ဘွဲ့ ယူတုံးက အလွဲတွေပြန်သတိရမိတယ်
I'm reading your blog and KKK blog.
Nice to see your son's pics also.
congratulation...Ko La Kalay..Cheers
MBA ကြီးကို လာဂါရဝ ပြူသွားပါတယ်။ ရှေ့တက် တိုးရွေ.အောင်မြင်ပါစေ.။
thank you all my friends ...:)
ဘွဲ့ဝတ်စုံတွေနဲ့ တပျော်တပါးပုံတွေကို ပျော်ပျော်ပါးပါး သဘောတွေကျသွားမိပါတယ်။
ဟဲဟဲ.. ကျမတို့တုန်းကလည်း အဲဒီလိုပဲ.. ဒါပေမယ့် ရဲရဲတောက် ဓာတ်ပုံရိုက်ဖြစ်တဲ့အထိတော့ မဖြစ်ခဲ့ကြဘူးထင်တယ်။ သဘောကျလို့ ၀င်ပြီး ကွန်မက်ရေးသွားတာပါ။ စိတ်မဆိုးနဲ့နော်..
ပညာကို တတ်ရုံတင်မဟုတ်ဘဲ ရင်ထဲကပါ သိတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။
ဟားဟား.. ရီရတယ်.. လွဲတာကလည်း အကုန်လုံးပဲကိုး.. ဓာတ်ပုံနှစ်မျိုး ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့... မသိတဲ့လူဆို ဘွဲ့နှစ်မျိုးရတယ် ထင်နေတယ်...
MBA နဲ့ MET (Master in Evening Talks) လို့ ပြောလိုက်ပေါ့... :P
အားကျလိုက်တာ အကိုရယ်.. သမီးက ခုမှကြိုးစားတုန်း.. ABE ဖြေဖို့လုပ်နေတယ် စာမေးပွဲက ဒီဇင်ဘာမှာ စာလည်းမရသေးဘူး အိအိ
မိုးအေးအေးမှာ ကွေးမယ် ...
ပုဇွန်ထုတ်ကြီးတွေ မရှိတော့ရင် ...
I fail because of you...
Miss People 2008
ကလေးနို့မှုန့်တွေနဲ့ malamine ပြဿနာ
Serious health warning @ melamine
MSN Fantasy Football game
ABCလား အရက်ပြင်းလား @ Baron beer နိဒါန်း